Thin Section Slewing Bearing Factory - China Thin Section Slewing Bearing လုပ်ငန်းရှင်များ၊
Environmental equipment များတွင် Light type slewing bearings များကို အသုံးပြုသည်။
Wanda လှည့်လာခဲ ဖောက်သည်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပေးပို့ခြင်းတို့ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဖောက်သည်များ၏ ရှုထောင့်မှ အမြဲရှိနေခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ဖောက်သည်များက အလွန်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
XZWD|ODM စိတ်ကြိုက် လှည့်ကွင်း WD-061.20.1094F ပါးလွှာသော အမျိုးအစား ဝက်ဝံ
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့် slewing bearing ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။WD-061 Series တွင် အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များ ပါရှိသည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ: လေးအချက်အဆက်အသွယ်ဘောလုံး slewing ဝက်ဝံ
Seals အမျိုးအစား- နှစ်ထပ်တံဆိပ်များ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်- ပေါ့ပါးသော လျှောဝက်ဝံများသည် အင်ဂျင်နီယာရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးအတွက် စံပြဖြစ်ပြီး အလေးချိန်သည် အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အထူးသင့်လျော်သည်၊ XZWD Bearing ၏ကျွမ်းကျင်သောအသိပညာသည် သင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာပရောဂျက်များအတွက် အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကို အားကိုးနိုင်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော လှုပ်ရှားမှုနှင့် ထိရောက်မှု။
အစားအစာစက်ပစ္စည်းအတွက် ပြင်ပဂီယာပါသော အပေါ့စား Slewing Bearing (WD-061)
1. Light type ကို Thin section Slewing bearing လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
2. ၎င်းတွင် Single row Ball slewing bearing နှင့် တူညီသောဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသည်။
3. Light type Slewing bearing သည် ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်ရှိပြီး လိုက်လျောညီထွေလှည့်ပါ။
4. ပါးလွှာသောအပိုင်း slewing bearing ကို အစားအသောက် စက်ယန္တရား၊ စည်သွပ်ဗူး စက်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စက်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံသည် 12 လဖြစ်သည်။
အတွင်းဂီယာပါရှိသော သွားများ 232 Series
232 စံစီးရီးရှိ XZWD လျှောဝက်ဝံဝက်ဝံများတွင် spacer နိုင်လွန်ဖြင့် လေးမှတ်ပါ ဘောလုံးဝက်ဝံတန်းတစ်ခုပါရှိသည်။
ဤထုတ်ကုန်များသည် အတုအယောင်ကွင်းများဖြစ်ပြီး အတွင်းပိုင်း၊ စတုရန်းအပိုင်း၊ တောင့်တင်းသောဂီယာကွင်းနှင့် အပြင်ဘက်အနားကွပ်လက်စွပ်တို့ပါရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုအဖြစ် စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။XZWD slewing bearings များကို 232 standard series တွင် ကြိုတင်ချောဆီဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
232 စံစီးရီး XZWD ရိုတာရီ ဝက်ဝံများသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တောင့်တင်းမှုကြား မျှတမှုရှိပြီး ပြင်ပအနားကွပ်လက်စွပ်တစ်ခုသာ ပါဝင်ပါသည်။
တည်ဆောက်ပုံ၏ တကယ့်အားသာချက်မှာ စုစည်းရလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ထပ်တံဆိပ်သည် အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် ဖုန်ထူသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
XZWD 232 standard series slewbacks များသည် low loads အောက်တွင် မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း (30 RPM) ဖြင့် လှည့်နိုင်သည်။
232 စံစီးရီး XZWD slewing ပံ့ပိုးမှုများကို အောက်ပါကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုပါသည်။
* အလင်း Self-propelled ကရိန်း;
အပြင်ဘက်ဂီယာပါရှိသော သွားများ 231 Series
1. စီးရီး 231 ၏ ဖော်ပြချက်
231 စံစီးရီးရှိ XZWD လွှဲဝက်ဝံများတွင် နိုင်လွန်တွင် spacers ပါသည့် အဆက်အသွယ်ပွိုင့်ဘောလုံး လေးခု၏ တစ်တန်းရှိသည်။ဤထုတ်ကုန်များသည် အပြင်ဘက်၊ စတုရန်းအပိုင်း၊ တောင့်တင်းသော သွားတိုက်ထားသော လက်စွပ်နှင့် အတွင်းပိုင်းဘောင်ခတ်ထားသော လက်စွပ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့် အတုပြုလုပ်ထားသော လက်စွပ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။231 standard series ရှိ XZAD slewing bearings များကို ဆီကြိုလိမ်းပေးပါသည်။
231 standard series ရှိ XZWD slewing bearings သည် flanged ring တစ်ခုသာပါရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တောင့်တင်းမှုကြားတွင် ကောင်းမွန်သောအပေးအယူကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ဤဆောက်လုပ်မှု၏အစစ်အမှန်အားသာချက်မှာ၎င်း၏အလွယ်တကူတပ်ဆင်ခြင်းတွင်ဖြစ်သည်၊ တံဆိပ်နှစ်ထပ်သည်ပြင်ပသို့မဟုတ်ဖုန်ထူသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင်တပ်ဆင်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။XZWD 231 စီးရီး standard slewing rings များသည် low loads အောက် 30rpm တွင် လှည့်နိုင်သည်။
အနားကွပ် လျှောကွင်းတွင် အဆက်အသွယ်ဘောလုံးလေးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ တူညီသော်လည်း အလေးချိန်သည် ပေါ့ပါးပြီး အချို့သော အပေါ့စား စက်ပစ္စည်း appliacaitons များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
* ပေါ့ပါးသော ကိုယ်တိုင်တွန်းကန်အား ကြိုးကြာများ၊
တစ်ခုတည်းသောဘော်လုံးတစ်လုံးပါရှိသောအလျားလိုက်အလျားလိုက်၊ ဂီယာသွားများမပါသော၊ Standard 230 Series
230 စံစီးရီးရှိ XZWD လွှဲဝက်ဝံများတွင် နိုင်လွန်တွင် spacers ပါသည့် အဆက်အသွယ်ပွိုင့်ဘောလုံး လေးခု၏ တစ်တန်းရှိသည်။၎င်းတို့ကို ဂီယာသွားများမပါဘဲ ကွင်းနှစ်ခုလုံးကို အနားကွပ်ထားသော အသွင်သဏ္ဍာန်အဖြစ် ဖန်တီးထားသည့် အတုအယောင်ကွင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။230 standard series ရှိ XZWD slewing bearings များကို ဆီကြိုလိမ်းထားပါသည်။
230 standard series ရှိ XZWD slewing bearings သည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တောင့်တင်းမှုကြားတွင် ကောင်းမွန်သော အပေးအယူကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ ၎င်းတို့၏ ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုနှင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူမှုတို့ကြောင့် အနားကွပ်နှစ်ခုပါရှိသည်။၎င်းတို့၏နှစ်ထပ်တံဆိပ်သည် ပြင်ပ သို့မဟုတ် ဖုန်ထူသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင်လည်း တပ်ဆင်နိုင်သည်။XZWD 230 standard series slewing bearings များသည် low load အောက်တွင် မြန်နှုန်းမြင့် (30 rpm) ဖြင့် လှည့်နိုင်သည်။
XZWD|အရည်အသွေးမြင့်စက်ရုံသည် slewing turntable bearing ကိုထုတ်လုပ်သည်။
Wanda slewing bearing သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးစီအတွက် လျှပ်ကူးလက်စွပ်အတွက် ကြီးမားသောပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်သည် ။
XZWD |အလင်းအမျိုးအစား လျှပ်ကူးလက်စွပ် WD-060.20.0544 VSU20 RKS.060 IMO11-20 နှင့် အလားတူ
light slewing bearing သည် single row point four point contact ball slewing bearing နှင့် တူညီသော်လည်း အလေးချိန်သည် ပေါ့ပါးပြီး အချို့သော light type စက်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Light slewing ring bearing ကို အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည်-
1. အစားအသောက် စက်ပစ္စည်း
2. စည်သွပ်ဗူး စက်ပစ္စည်း
3. ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စက်ယန္တရားများ
4. ကားပါကင်စနစ်များ, etc
အခြားသော အပေါ့စားစက်များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။